के तपाईं 'सुस्त गति'को इन्टरनेटले हैरान हुनुभएको छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
के तपाईं ‘सुस्त गति’को इन्टरनेटले हैरान हुनुभएको छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
कोशी अनलाइन शनिबार, ३० भदौ, २०७५ मा प्रकाशित
अहिलेको समयमा सूचना–प्रविधि हाम्रो जीवनका लागि अभिन्न अंग बनिसकेको छ । त्यसमा पनि मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेटजस्ता कुराबिना हाम्रा दैनिक कार्य नै अपूर्ण हुन थालिसकेका छन् ।
यदि तपाईं इन्टरनेटबाट काम गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईं इन्टरनेट सुस्त भएकै कारण वाक्क हुनुभएकै होला । विशेष गरी पूर्वाधार कमजोर भएका हाम्रोजस्तो देशमा यस्ता समस्या बढी सिर्जना हुने गर्छन् ।
तर, हामीले दैनिक चलाउने इन्टरनेटबारे कति कुरा थाहा पाइरहेका हुँदैनौं । त्यसका लागि यी कुरा थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ
– सामान्यतः अहिले हामीलाई १ एमबिपिएस क्षमताको नेट आवश्यक पर्छ । व्यावसाियक कामका लागि हो भने योभन्दा बढी गतिको पनि चाहिन्छ । पहिला त तपाईंले के प्रयोजनका लागि चलाउने हो, टुंगो लगाएर सोहीअनुसारको गतिको इन्टरनेट प्याकेज खरिद गर्नुपर्छ ।
– तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ कि, ३५६ केबिपिएसले चाहेअनुसार स्काइपमा भिडियो च्याट गर्न सकिँदैन । यी काम गर्नलाई कम्तीमा ७६८ केबिपिएस क्षमता गतिको नेट चाहिन्छ । त्यसैगरी, युट्युबबाट भिडियो हेर्न १ एमबिपिएसले पर्याप्त हुन्छ । तर, उच्च क्वालिटीमा भिडियो हेर्न भने कम्तीमा ५ एमबिपिएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेटबिना हुँदैन ।
– कतिपय अवस्थामा नेट सेवा दिने कम्पनीले ग्राहकलाई एउटा गतिको प्याकेज भनेर त्योभन्दा कम गतिको प्याकेजको सेवा दिएर ठगी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । यदि तपाईंले पैसा तिरेअनुसार र सम्झौता गरेअनुसार गतिको नेट पाउनुभएको छैन भने समस्या हुन सक्छ ।
यस्तो कुरा पत्ता लगाउन इन्टरनेटमा विभिन्न टुल पाइन्छन् । त्यसबाट जाँच गर्न सकिन्छ । अथवा, तपाईंले गुगल गरेर इन्टरनेटको गति जाँच्ने टुल्सबाट पनि यो पत्ता लगाउन सक्नुहुछ ।